August 2016 - Page 18 of 18 - Puntland Mirror Believable Media Website
Wasaarada howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya oo sheegtay dhawaan in ay bilaabayso dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka
August 2, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaarada howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay maanta oo Talaado ah in ay qorshaynayso in dib loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida ugu dhaqsaha badan. Wasiirka howlaha guud ee dowlada federaalka […]
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya oo ku tilmaamy ‘masuuliyad daro’ hadalkii Raila Odinga uu ku sheegay in maamulka Somaliland la aqoonsado
August 2, 2016 Abdi Omar Bile 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa si caro leh uga jawaabtay hadalkii hoggaamiyaha xisbiga Cord ee Kenya Raila Odinga, oo uu ku sheegay in beesha caalamka aqoonsato maamulka Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya u fadhiya […]
Murashaxa xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump oo ka digay in doorashada Maraykanka noqoto ‘mid la qorsheeyay’
Washington-(Puntland Mirror) Murashaxa xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Maraykanka ee bisha November ay noqon karto mid la qorsheeyay. Trump oo kala qaybgalay taageerayaashiisa munaasabad banaanbax ah oo ka dhacday Columbus, […]
Garowe-(Puntland Mirror) The Puntland President Abdiweli Mohamed Ahli has rewarded the Puntland football team a $1,000 USD each player after they won the Somali football states tournament, which was held last month in Mogadishu. Abdiweli […]
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xalay oo Talaado ahayd dhaqaale abaal-marin ah guddoonsiiyay ciyaartoyga kubada cagta Puntland. Madaxweynaha ayaa mid 1,000 oo dollar siiyay ciyaartooyga oo dhawaan Puntland oo matalayay ciyaaraha kubada cagta […]
August 1, 2016 Puntland Mirror 0
Tripoli-(Puntland Mirror) Maraykanka ayaa duqaymo ku qaaday meelaha ay Dowlada Islaamiga ah (ISIS) kaga sugantahay dalka Libya, kadib markii dowlada ay Qaramada Midoobay dabada ka riixayso ee Libya ay ka codsatay Maraykanka, sida ay sheegtay […]
August 1, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha guddiga doorashada heer federal ee Soomaaliya ayaa ka gaabsaday xilliga ay dhacayaan doorashooyinka dalka. Cumar Maxamuud Cabdule oo shir saxaafadeed ku qabtay caasimada Soomaaliya, Muqdisho ayaa ka hadlay howlaha shaqo ee guddiga […]
Moscow-(Puntland Mirror) Shan Ruush ah ayaa ku dhimatay kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo militariga lahaayeen ay ku burburtay waqooyiga dalka Suuriya, sida ay sheegeen Ruushka. Diyaarada ayaa ku dhacday gobolka Idlib, […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa u dabaaldegaysa sanadguuradeeda 18-aad ee dawladnimo, waxaa la asaasay 1-dii Agoosto, 1991, Garoowe. Kumanaan reer Puntland ah ayaa isugu soo baxay goobaha ay bulshada ku kulanto ee kuyaala magaalooyinka waa weyn […]
Garowe-(Puntland Mirror) Somalia’s Puntland today celebrates its 18th anniversary of statehood, it was established in August 1, 1998 in Garowe. Thousands of Puntlanders took to the social gatherings in the major cities of Puntland to […]
Ciidamada booliiska qeybta gobolka Nugaal oo magaalada Garoowe ku qabtay 12 kartoon oo khamri ah
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska gobolka Nugaal ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay kartoomo khamri ah, sida ay sheegeen saaraakiishu. Ciidamada oo habeenimadii Talaadada ahayd howlgal ka sameeyay caasimada Puntland ee Garoowe ayaa kusoo qabtay 12 [...]